အခုမွကစားသမားတစ္ေယာက္လုိျပန္ျဖစ္ေနၿပီလား ဆန္းခ်က္ဇ္…ထုတ္ပယ္ခံရတာက မတရားေၾကာင္း ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္
September 29, 2019 phyo News, Serie A 0
ယူႏုိက္တက္မွာကစားခဲ့တဲ့ ၁၈လတာကာလအတြင္း ပြဲကစားတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သတင္းေတြအေတာ္ေလးရွားခဲ့တဲ့ တုိက္စစ္မွဴး ဆန္းခ်က္ဇ္ဟာ အင္တာမီလန္ကို ေရာက္ရွိၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကစားသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံစံအတုိင္း ျပန္လည္ခံစားေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေတြက ေဖာ္ျပေနၾကပါတယ္။
သူဟာ ၿပီးခဲ့ဲတဲ့ေႏြရာသီေစ်းကြက္မွာ ယူႏုိက္တက္ကေန အင္တာမီလန္ကို တစ္ရာသီအငွားနဲ႔ ေရာက္ရွိလာခ့ဲသူျဖစ္ၿပီး အေစာပိုင္းမွာ လူစား၀င္ကစားသမားအျဖစ္သာ ပါ၀င္ကစားခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ မေန႔ညက ဆမ္ဒိုးရီးယားကို ၁-၃ ဂိုးနဲ႔အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ပဲြမွာ အသင္းသစ္အတြက္ ပထမဆုံးပြဲထြက္အျဖစ္ ကစားခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။
အသက္ ၃၀အရြယ္ရွိ ခ်ီလီလက္ေရြးစင္ ဆန္းခ်က္ဇ္ဟာ အူဒီးနိစ္၊ လာဇီယိုတို႔နဲ႔ပြဲေတြမွာ အရန္အျဖစ္ ကစားခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ႕ရဲ႕ပထမဆုံးပဲြထြက္မွာ အသင္းရဲ႕အေရးပါသူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပဖို႔ အခ်ိန္သိပ္မယူခဲ့ရဘဲ ပြဲခ်ိန္ ၂၂မိနစ္မွာပဲ ေနာက္ထပ္ကစားသမားသစ္ ဆန္ဆီရဲ႕ကန္ခ်က္ သူနဲ႔ထိကာ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းၿပီး ဂိုးထဲ၀င္သြားပါတယ္။
အေစာပိုင္းမွာ အဲဒီသြင္းဂိုးကို ဆန္းခ်က္ဇ္ရဲ႕သြင္းဂိုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဆန္ဆီရဲ႕သြင္းဂိုးအျဖစ္ တရား၀င္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၂မိနစ္အၾကာမွာေတာ့ ဆန္ဆီရဲ႕ကန္သြင္းခ်က္ သူ႕ဆီ ေရာက္လာတာကို ဆန္းခ်က္ဇ္က အလြယ္တကူပိတ္သြင္းကာ အင္တာကစားသမားဘ၀ သူ႕ရဲ႕႔ပထမဆုံးဂိုးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ပထမပိုင္းမၿပီးခင္မွာ အ၀ါကတ္ျပသခံထားရတဲ့ ဆန္းခ်က္ဇ္ဟာ ပဲြခ်ိန္ ၄၆မိနစ္မွာေတာ့ ပင္နယ္တီဧရိယာအတြင္း ဒုိင္ဗင္ထုိးတယ္လုိ႔ဆုိကာ ၂၀ါ ၁နီနဲ႔ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။
”အသင္းရဲ႕ႏိုင္ပြဲအတြက္ေရာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပထမဆုံးဂိုးအတြက္ပါ ေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္။ အသင္းရဲ႕ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈက အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ထုတ္ပယ္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့မေပ်ာ္မရႊင္ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီလုိထုတ္ပယ္ခံရတာက မတရားဘူးလုိ႔လည္း ထင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ေနာက္ကစားမယ့္ပြဲအေၾကာင္း ေခါင္းထဲေရာက္ေနပါၿပီ”လုိ႔ ဆန္းခ်က္ဇ္က အင္စတာဂရမ္မွာ ပုိ႔စ္တင္ခဲ့ပါတယ္။
အခုမှကစားသမားတစ်ယောက်လိုပြန်ဖြစ်နေပြီလား ဆန်းချက်ဇ်…ထုတ်ပယ်ခံရတာက မတရားကြောင်း ဖြေရှင်းချက်ထုတ်
ယူနိုက်တက်မှာကစားခဲ့တဲ့ ၁၈လတာကာလအတွင်း ပွဲကစားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ သတင်းတွေအတော်လေးရှားခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဆန်းချက်ဇ်ဟာ အင်တာမီလန်ကို ရောက်ရှိပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံအတိုင်း ပြန်လည်ခံစားနေရပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းတွေက ဖော်ပြနေကြပါတယ်။
သူဟာ ပြီးခဲ့ဲတဲ့နွေရာသီဈေးကွက်မှာ ယူနိုက်တက်ကနေ အင်တာမီလန်ကို တစ်ရာသီအငှားနဲ့ ရောက်ရှိလာခဲ့သူဖြစ်ပြီး အစောပိုင်းမှာ လူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်သာ ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် မနေ့ညက ဆမ်ဒိုးရီးယားကို ၁-၃ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ အသင်းသစ်အတွက် ပထမဆုံးပွဲထွက်အဖြစ် ကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၀အရွယ်ရှိ ချီလီလက်ရွေးစင် ဆန်းချက်ဇ်ဟာ အူဒီးနိစ်၊ လာဇီယိုတို့နဲ့ပွဲတွေမှာ အရန်အဖြစ် ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲထွက်မှာ အသင်းရဲ့အရေးပါသူဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ အချိန်သိပ်မယူခဲ့ရဘဲ ပွဲချိန် ၂၂မိနစ်မှာပဲ နောက်ထပ်ကစားသမားသစ် ဆန်ဆီရဲ့ကန်ချက် သူနဲ့ထိကာ လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး ဂိုးထဲဝင်သွားပါတယ်။
အစောပိုင်းမှာ အဲဒီသွင်းဂိုးကို ဆန်းချက်ဇ်ရဲ့သွင်းဂိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆန်ဆီရဲ့သွင်းဂိုးအဖြစ် တရားဝင်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး နောက် ၂မိနစ်အကြာမှာတော့ ဆန်ဆီရဲ့ကန်သွင်းချက် သူ့ဆီ ရောက်လာတာကို ဆန်းချက်ဇ်က အလွယ်တကူပိတ်သွင်းကာ အင်တာကစားသမားဘ၀ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဂိုးအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမပိုင်းမပြီးခင်မှာ အဝါကတ်ပြသခံထားရတဲ့ ဆန်းချက်ဇ်ဟာ ပွဲချိန် ၄၆မိနစ်မှာတော့ ပင်နယ်တီဧရိယာအတွင်း ဒိုင်ဗင်ထိုးတယ်လို့ဆိုကာ ၂ဝါ ၁နီနဲ့ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
”အသင်းရဲ့နိုင်ပွဲအတွက်ရော ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးဂိုးအတွက်ပါ ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ အသင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုက အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ထုတ်ပယ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မပျော်မရွှင်ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီလိုထုတ်ပယ်ခံရတာက မတရားဘူးလို့လည်း ထင်ပါတယ်။ အခုတော့ နောက်ကစားမယ့်ပွဲအကြောင်း ခေါင်းထဲရောက်နေပါပြီ”လို့ ဆန်းချက်ဇ်က အင်စတာဂရမ်မှာ ပို့စ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
မာလ္ဒီနီကို ေက်ာ္ၿပီးကလပ္ပြဲအမ်ားဆုံးကစားတဲ႔ စံခ်ိန္သစ္တင္လိုက္လို႔ ဘူဖြန္ဂုဏ္ယူေန
အယ္ခမာရဲ႕ျမက္ခင္းတုကြင္းေၾကာင့္ မန္ယူရဲ႕ဒဏ္ရာျပႆ နာပိုဆိုးလာမွာ စိုးရိမ္ေနရ
အဲရစ်ရမ်ဆေးကြောင့် သရဲနီတွေ ဒီရာသီမှာ set-piece တွေကနေ ဂိုးမပေးရသေး . . . September 21, 2021
ကမ္ဘာ့ဖလားကို ၂ နှစ် ၁ ကြိမ် ကျင်းပမဲ့အစား နှစ်တိုင်းသာ ကျင်းပလိုက်ပါတော့ဆိုပြီး ခပ်ရွဲ့ရွဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ အန်ဆယ်လော့တီ September 21, 2021
ရလာဒ်ဆိုးရွားနေပေမယ့် ကိုးမန်းကို ထုတ်ပယ်ဖို့ မရှိသေးတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်း September 21, 2021
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အသင်းဂန္ထဝင်ဂျင်မီဂရိဗ်စ်အတွက် ရုပ်တုထုလုပ်ဂုဏ်ပြုဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့ စပါးအသင်း September 21, 2021
လိုင်ယွန်နဲ့ပွဲမှာ ခြေစွမ်းမပြနိုင်လို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ မက်ဆီ September 21, 2021
အဲရစ်ရမ်ဆေးကြောင့် သရဲနီတွေ ဒီရာသီမှာ set-piece တွေကနေ ဂိုးမပေးရသေး . . .
ကမ္ဘာ့ဖလားကို ၂ နှစ် ၁ ကြိမ် ကျင်းပမဲ့အစား နှစ်တိုင်းသာ ကျင်းပလိုက်ပါတော့ဆိုပြီး ခပ်ရွဲ့ရွဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ အန်ဆယ်လော့တီ
ရလာဒ်ဆိုးရွားနေပေမယ့် ကိုးမန်းကို ထုတ်ပယ်ဖို့ မရှိသေးတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်း
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အသင်းဂန္ထဝင်ဂျင်မီဂရိဗ်စ်အတွက် ရုပ်တုထုလုပ်ဂုဏ်ပြုဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့ စပါးအသင်း
လိုင်ယွန်နဲ့ပွဲမှာ ခြေစွမ်းမပြနိုင်လို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ မက်ဆီ